Away dhalintii Soomaaliyeed dalkii laqeybsaye dadkiina dhamaade’e? | Markacadey.net Facebook
Warka oo Video	Daawo Video: Gudoomiayaha golaha fulinta ahlusuna oo kawarbixiyay heshiiskii Ahlusuna iyo dowladda halka oo marayo Daawo Sawirada: Nicholas Kay iyo Raa’isal Wasaaraha oo ka hadlay weerarkii Dhismaha UNDP Daawo Video: Weerarkii maanta lagu qaaday Xarunta UNDP ee Magaalada Muqdisho WAR DEG DEG: Wasiirka Arrimaha Gudaha oo sheegay in Saraakiil Ajnabi ah lagu dilay weerarkii UNDP Ciidamada Alpha Group oo xoog ku galay Xarunta UNDP oo weerar qorsheysan lagu qaaday, lana wareegay gacan ku heynta Dhismahaasi WAR DEG DEG: Al Shabaab oo sheegatay masuuliyada weerarka Xarunta UNDP WAR DEG DEG: Weerar ismiidaamin ah oo gil gilay Magaalada Muqdisho Nabadoon Axmed Diiriye oo digniin adag u diray Dowladda Itoobiya, kana digay inay dhibaato cusub abuurto Col. Maxamed Buule oo sheegay dhaawaca soo gaaray Col. Yaasiin Raadeer inaysan ka xumeyn Ciidamada Nabad Suggida iyo Amisom oo maanta gudaha ugu jira Degmada Xamar Weyne iyo hawlgalo ay ka wadaan By: Mastar // Jun 25 2012 at 9:09 am // 1,195 Reads // Wararka Somalia Away dhalintii Soomaaliyeed dalkii laqeybsaye dadkiina dhamaade’e? Share Tweet
Dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed ay kunool dunida dacaladayda waxaan xasuusinaynaa inay cashir ka bartaan waxa ka dhacaaya dalka Masar iyo meelo badan oo dunida kale ah, waxaa xaqiiq ah isbedelada kadhaca dunida waxaa lafdhabar u ah dhalinyaro. Hadaba su’aashu waxay tahay, maxaa inagu dhacay haddii aynu nahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo wax uga bedeli waynay xaaladda dalkayna ee murugsan muddadadheer?
Laga soo bilaabo 1529-kii xilligii Imam Axmed Gurey, dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ahaan jirayn kuwo fir fircoon markastana ka shaqeeya wanaaga dalkooda, dadkooda iyo midnimada Soomaaliyeed. Maantase dhalinyaradii Soomaaliyeed waxay ku kala jiraan kooxo kala wata magacyo iyo mabaadii kala duwan, kooxahas oo aan wax ku falayn wanaaga dadkayna iyo dalkayna. Haddii aanu nahay dhalinyaradii Soomaaliyeed, maxaa inaga qaaday kartidii aan lahaanjirnay oo inaga dhigay hannaadyo qabaan u ah kooxo danaystayaal ah?
Dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan oogu baaqaynaa inay ka qeyb qaataan kacdoonka Xisbiga Tiir uu kaga duwan dhamaan xisbiyada kale ee siyaasiga ah, todobadaan qodobo ee hoos kuqoran iyo kuwo kalaba: 1) Waa xisbigii ugu horeeyay ee lugu dhawaaqay in uu yahay siyaasi.
2) Waa xisbigii ugu horeeyay ee kahor yimaada nidaamka 4.5 si shaac-soon.
3) Waa xisbiga kaliya oo ayy aas aasayn, hogaankana u hayaan dhalinyaro Soomaaliyeed.
4) Waa xisbiga kaliya oo xubnahiisu intooda badan ay yihiin dhalinyaro.
5) Waa xisbiga kaliya oo xubno kuleh 16 wadan oo dunida kamid ah.
6) Waa xisbiga kaliya oo aaminsan hal kudhiga “U isticmaal wiixii tegay taariikh, maya aargoosi. U isticmaal mustaqbalka in’aad dhisitd, maya in’aad dumisid”.
7) Waa xiisbiga kaliya oo aaminsan in xalka dalkayna loogu raadiyo halkudhiga “Hadaan la-kala roonaan roob mada’o”.
Dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in’ay ka qeyb qaataan kacdoonka ay wadaan dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku bahoobay Xisbiga Tiir, oo ah xisbiga kaliya oo leh qorshayaal cadcad oo lugu badbaadinaayo dalkayna baaba’ay iyo dadkayna tabaaleysan.
Astaanta Xisbiga Tiir
Dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay nala soo xiriiraan si’aan wadajir ugu badbaadino dalkayna iyo dalkayna ku jira xaaladda cakiran.
Nagala Soo Xiriiri website-ka xisbiga Tiir oo ku qoran Afsoomaali iyo English. www.tiir.org
Maamulka Xisbiga Tiir
Random Video	Sheeko Gaaban - Facebook iyo Xaaska